July 2016 - Sawirrotv
Dawladda oo ka Hadashay Weerarkii Xarunta CID & Maydadka Ragii Weerarka Fuliyay oo Lasoo Bandhigay (VIDEO)
July 31, 2016 – Wasiirka Amniga Gudaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed ayaa Warbaahinta kula hadlay gudaha xarunta la weeraray ee CID-da kadib markii ay soo dhamaysteen shir kooban oo ay halkaasi ku yeesheen. Kulankaasi oo ay ka qayb galeen wasiirka Amniga,Taliyeyaasha Booliska iyo Nabad Suggida Gobolka Banaadir, ayaa waxaa looga hadlay …
Maydka Ragii Weeraray Xarunta CID (VIDEO)
Kulnka kadib ayuu wasiirku faah faahin ka bixiyay sidii ay wax u dhaceen, sheegayna in ciidamada amaanka ay hayeen xogta weerarkan ayna ka hortageen ragii weerarka soo qaaday. Hadaawan Qaybta danbe Hadii aad Calool Jilcantahay Ururka Al-Shabaab ayaa sheegay masuuliyada weerarkani ismiidaaminta ahaa ee maanta lagu qaaday xarunta CID, waxa ayna Shabaab sheegeen in weerarkaasi …
DAAWO: sidii loo soo Dhaweeyay Xulka Maamul Goboleedka Puntland (SAWIRRO)
July 31, 2016 – Madaxweynaha maamulka Puntland mudane, Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo uu weheliyo Madaxweyne ku-xigeenka Eng. Cabdixakiim Cabdullaahi Cumar Camey ayaa maanta Garoonka diyaaradaha ee Konoco ee magaalada Garoowe ku soo dhoweeyey ciyaaryahanada xulka kubbadda cagta Puntland, kuwaas oo dhowaan ku guuleystey koobkii ciyaaraha ee u dhexeeyey Xulalka Maamul goboleedyada dalka. Soo dhoweyntani …
DAAWO: Sawirrada Ragii Weerarka Soo Qaaday iyo Shacabkii ay Qaraxa ku Laayeen (SAWIRRO)
July 31, 2016 – Wasaarada Amniga qaranka ee Dowladda Federalka Soomaaliya ayaa sheegtay in raggii weerarka ku soo qaaday Xarunta CID-da ay gaarayeen ilaa 7 ruux oo Al Shabaab ka tirsan. Afhayeenka Wasaarada Amniga gudaha, C/kaamil Macalin Shukri ayaa warbaahinta u sheegay in todobada nin ee weerarka soo qaaday Shan ka mid ahi inay toogteen …
Muuqaalkii ugu Horeeyay ee Laga Duubay Xaruntii uu Qaraxa ka Dhacay ee CID-da (VIDEO)
July 31, 2016 – Waxaa maanta weeraro isugu jira ismiidaamin iyo mid toos ahaa, lagu qaaday Xarunta Dambi baarista ee CID, waxaana weerarkan ka dhashay qasaaro badan oo isugu jiro mid naf iyo maalba leh. Weerarka ayaa ku bilowday labo gaari oo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay, kuwaas oo qaraxyadoodu qadar daqiiqado ah uu u …
DAAWO: Qaraxyadii Xarunta CID-da (VIDEO)
Inta la xaqiijiyay weerarkan waxaa ku dhintay dad gaaray 10-qof oo u badnaa dad shacab ah oo marayay afaafka hore ee xarunta CID, dadka dhintay ayaana saarnaa mooto bajaaj iyo gaadiidka dadweynaha, oo nasiib daro halkaasi marayay. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegay masuuliyada weerarkani ismiidaaminta ahaa ee maanta lagu qaaday xarunta CID, waxa ayna Shabaab sheegeen …
Weerar Live Xarunta CID-da (VIDEO)
War hadda na soo gaaraya ayaa sheegaya in wax yar ka hor Weerar Is miidaamin ah lagu Qaaday Xarunta CID-da ee Magaalada Muqdisho. Xarunta la weeraray ee CID-da ayaa waxaa ku xiran maxaabiis dambiyo kala duwan loo haysto, waxaa sidoo kale xaruntaasi ay tahay mid mashquul badan, waxa ayna xaruntan ku taala kasoo horjeedka Hotelka …
Ragii Doonayay inay Gudaha u Galaan Xarunta CID-da oo la Sheegay in La Toogtay (SAWIRRO)
July 31, 2016 – Ciidamadsa amniga ee ku sugan goobta uu ka dhacay qaraxa ayaa sheegay in Toogasho lagu dilay Dableeydii Weerarka ku qaaday xarunta Dambi baarista Ciidanka Booliska Soomaaliya ee CID. Dableyda Toogashada lagu dilay ayaa la sheegay in ay gaarayaan ilaa Labo, kuwaas oo doonayay in ay gudaha u galaan xarunta sida ay …
DEG-DEG: Weerar Lagu Qaaday Xarunta CID-da ee Magaalada Muqdisho (SAWIRRO)
July 31, 2016 – War hadda na soo gaaraya ayaa sheegaya in wax yar ka hor Weerar Is miidaamin ah lagu Qaaday Xarunta CID-da ee Magaalada Muqdisho. Weerarkan oo ahaa mid Ismiidaamin iyo mid loo maleenayo in uu toos yahay, lagu qaaday xarunta Dambi baarista booliiska ee CID-da ee magaalada Muqdisho, waxaana xaruntaasi hada laga …
Ninkii Ugu Horeeyay ee Diyaarad ka soo Booda Isaga oo Baarashuuto Isticmaalin (VIDEO)
July 31, 2016 – Luke Aikins ayaa noqday ninkii ugu horeeyay ee taariikhda dunida oo diyaarad si iskiis ah uga soo booday isaga oo aanan isticmaalin wax baarashuut ah, arintani ayaa xalay ka dhacday magaalada California ee dalka Maraykanka. Ninkani ayaa ga’aansaday inuusan isticmaalin baarashuut badbaadiya hadii ay wax qaldamaan, laakiin waxaa lagu qasbay inuu …